Amadoda anempandla adumile | Amadoda anesitayela
Amadoda anempandla adumile
U-Alicia tomero | 27/10/2021 10:00 | imfashini, Amathrendi
Kulesi sigaba sizokhuluma ngakho impandla amadoda adumile. Zonke zinesitayela, ezithwalayo, ziyathandeka futhi zibuye zidume; Bangosaziwayo namadoda acebile. Ngokuhamba kweminyaka ukubonakala kwamadoda ayengenazinwele kuye kwancishwa amathuba. Abaningi babenenzondo yokungalitholi ikhambi lemvelo elingabasiza, kodwa abanye namuhla sebebukisa ngobuntu babo nempandla ngakho konke ukuzidla kwabo.
Sine ukufakelwa izinwele njengekhambi elingcono kakhulu lokuxazulula impandla futhi sinamadoda adumile anemali kanye nethuba lokusebenzisa ukwelashwa. Kodwa kude nakho konke lokhu bathanda ukuveza uhlangothi lwabo olukhangayo njengoba zinjalo. Abanye baze bafune indlela yokuyigqoka ibe mfishane noma baphuce, ngoba sisenkathini entsha yokuvuselela futhi uma unesibindi kuhle ngaso sonke isikhathi ukujwayela izitayela ezintsha.
6 UJohn Travolta
8 UMark Strong
Ungumlingisi wethu omuhle nohlekisayo, odume ngaye ama-movie wakho we-adventure nama-action. Uyindoda enemisipha futhi uyaphumelela ezindimeni zakhe ngenxa yokunakekelwa kwakhe okukhulu ngokomzimba. Ngokungangabazeki, iningi lezethulo zakhe zihlala zimelelwa njenge Impandla eqinile. Ungambona kumamuvi adumile afana ne-'The Rock' noma 'Journey to the center of the earth'.
Ungomunye wamadoda ethu adumile anempandla azinikele ecinema futhi aziwa ngawo chaza amafilimu esenzo ngezimo eziningi zokuqhuma. Yiba ubuso bensizwa eqinile futhi ngaphandle kokungabaza ukuthi ukugunda kwakhe izinwele kuthuthukisa ubuntu bakhe. Waziwa kumamuvi afana ne-'Transporter' ne-'Crank: High Voltage'.
Es umdlalo we-basketball odumile futhi wenze isigcawu ku-movie. Ukubukeka kwakhe bekulokhu kuwumlingiswa oye waletha udumo emfanekisweni wakhe, njalo futhi engenazinwele ngokuphelele. Kufanele ahlonishwe ngesizini yakhe engu-13 neChicago Bulls, ewina izindandatho eziyisithupha. Sithanda ukubukeka kwabo futhi isiphenduke isembozo izikhathi ezingama-50 kumagazini wezemidlalo Ezemidlalo.
Ukuba khona Kwakhe kwendoda engathi sína futhi eqinile kuwumfanekiso ophelele walabo idrama namafilimu esenzo. Ngakho-ke, umfanekiso wakhe wempandla uyamthanda futhi ngeke sajwayela ukumbona ngenye indlela. Siyamazi njengomlingisi kumamuvi afana ne-'The Chronicles of Riddick' kanye ne-'The Fast and the Furious'.
Sonke siyamkhumbula uBruce Willis nowakhe ebukekayo hairless indoda look, ehlale enesimo sengqondo sokuqhosha kukho konke ukudubula kwakhe futhi ngaphandle kokuphuthelwa imigilingwane. Besihlala sikuthanda ukubukeka kwakhe okuqinile, okuhehayo, futhi uvela ekhanga ngezithombe eziningi ezinyantisayo zokuqopha. Singamkhumbula kumamuvi adumile afana ne-'Pulp fiction', 'The glass jungle' kanye 'nomqondo wesithupha'.
Lo mlingisi akazange aphuce izinwele njalo, kodwa uma eminyakeni yamuva isithombe sakhe singesomuntu onempandla. Impela sesikujwayele ukubukeka kwakhe okusha futhi ubukeka emuhle. Wenze amafilimu amangalisayo najabulisayo 'ngeGrease', 'Pulp fiction' kanye 'neSaturday Night Fever'.
Yaziwa nangokuthi Zizou Ingenye yezinkanyezi zethu ezidumile. Sesihlale sihlangana nalokhu umdlali webhola wangaphambili omkhulu onokubukeka okubucayi nokukhangayo emasimini. Futhi kakade kuyingxenye yobuntu bakhe, ukubona uZinedine engenazinwele ekhanda lakhe futhi ngokuziqhenya ebonisa ukuthi uzizwa emuhle kangakanani. Wayeyi-'Ballon d'Or' ngo-1998 futhi waqanjwa 'Umdlali Womhlaba Ongcono Kakhulu' yiFIFA kuze kube izikhathi ezintathu. Siphinde sikukhumbuze ukuthi kanjani Umqeqeshi weReal Madrid phakathi namasizini ambalwa lapho awina khona izinkomishi ezintathu zaseYurophu.
Ubuso bakhe baziwa ngokulingisa indawo kamabonakude Umabonakude waseBrithani onabalingiswa abamangalisayo nanjengomhloli wamaphoyisa. Sonke sikhumbula uMarku njengaleyo ndoda eqinile, ebukeka iqinile, ngeso elihlabayo kakhuluNgakho-ke, iningi lamafilimu akhe adlala umlingiswa omubi.
Kuwo wonke lamadoda adumile ube wuphawu lwempandla akulona neze iphutha, njengoba libavune ngokuvelela nangobuhle. Ezimweni eziningi, lesi simo sifinyelelwa ngoba, njengomthetho ojwayelekile, ukuntuleka kwezinwele kubonakala ngaphezu kokubonakala futhi kugcina ukwenza ukushefa okuphelele kwekhanda.
Siyazi ukuthi ukushefa kulukhuni kakhulu ukubheka isitayela noma ukugunda izinwele, kodwa kukhona amadoda azama ukuphinda futhi ngoba ubanika ubuntu obuningi. Uma uthanda ukugunda izinwele eziphuciwe kakhulu, ungazama njalo izinwele ze-gradient, ngaphandle kokufinyelela ukushefa okuphelele. Ukuze uqedele ngezinwele ezingenasici futhi ezigundwe ngokuphelele, isimo kuphela esizoba yilezo zinwele ezingajwayelekile, futhi ukuqeda ukunikeza ukubukeka okuhlanzekile nokuhlukile.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amadoda anempandla adumile